Fanehoan-kevitry ny minisitry ny Fitsarana : “Tsy voamarina ny nahasamborana an-dRabekoto Raoul” | NewsMada
Manomboka mifamahofaho ny toe-draharaha. Nitondra fanazavana ny minisitry ny Fitsarana, Imbiki Herilaza, omaly, manoloana ny nahasamborana ny tale jeneralin’ny Cnaps, Rabekoto Raoul Arizaka. Mifanohitra tanteraka amin’ny nambaran’ny tonia mpampanoa voalohanybeo anivon’ny Tendrom-pitsarana misahana ny ady amin’ny koliloky (Pac) anefa ny nambarany.
“Tsy afa-manamarina ny nasamborana azy io izahay”, hoy izy, raha niatrika ny fianianan’ireo mpisolovava, tetsy Anosy. Tsy fantatry ny fanjakana izany na voasambotra tokoa na tsia ity filohan’ny Federasion’ny baolina kitra ity.
Nanambara ny efa nandefasana ny didy fampisamborana iraisam-pirenena anefa ny eo anivon’ny fitsarana. Tsy tonga tany Bénin, firenena voalaza fa nahatrarana azy ny taratasy ? Sa tafaporitsaka indray ve ity mpitantana ny Cnaps teo aloha ity ?
Na izany aza, voalaza fa misy lonilony sy tsy fahafaham-po eo amin’i Bénin sy ny fitantanan’ny Federa­sion’ny baolina kitra (Fifa) ary maharaka io olana momba ity filohan’ny FMF ity izy ireo. Nohararaotin-dry zareo Beninoà izany nisamborana an-dRabekoto Raoul Arizaka namita iraka avy amin’io rafitry ny kitra maneran-tany io tany amin’izy ireo. Navotsotr’izy ireo indray izany avy eo ?
Fiaraha-miasa ara-pitsarana amin’i Bénin
Tsiahivina fa loharanom-baovao avy eo anivon’ny Pac, tamin’ny alalan’ny tonia mpampanoa lalàna ambony, Razafidrakoto Solohery ny nilazana ny nasahamborana azy ity, herinandro lasa izao. Tsy vitan’izany fa voalaza fa efa mandeha hatramin’ny dinika sy fifampiraharahana ara-diplaomatika amin’ny fampodiana an-tanindrazana ny tale jeneralin’ny Cnaps teo aloha izany. Tsy mazava izany hatreto ny toe-draharaha.